ဤအလွန်အရေးကြီးသော မေးခွန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ လူ့အတွေးအမြင်များကို ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမည် မဟုတ်ပါ။ ဤမေးခွန်း၏ အဖြေများကို သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် ''ဖော်ပြခြင်း'' တစ်ခုဖြစ်သည်။
''ဖော်ပြခြင်း'' (revelation) သည် ''ဖုံးကာထားခြင်းကို ဖော်ပြသည်'' ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ဘုရားသခင်သည် မေးခွန်းများစွာမှ ဖုံးကာထားသောအကာကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကို မပြောပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်သည့် အရာများဖြစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်း၊ အသက်၊ သေခြင်းနှင့် နောက်ဘဝနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာများနှင့်ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက်ချက်များစွာကို ကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ''အပြစ်နွံထဲတွင် လုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော လူသားနှင့်ခရစ်တော် အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပြီးပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်း''ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤစာကြောင်းကို သင်အလွတ်ရ သင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျမ်းစာထဲ၌ သင်လေ့လာသောအရာမှန်သမျှ အထက်ပါ စာကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် အခြားစာအုပ်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားသည်။
အခြားစာအုပ်အားလုံးနှင့်ကွဲပြားရခြင်းမှာ ဤစာအုပ်ကို ဘုရားသခင်က မှုတ်သွင်းတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် သည် ဤစာအုပ်ကိုရေးရန် လူများကိုအသုံးပြုသော်လည်း သူကိုယ်၌က ဤ စာအုပ်ကို ရေးသားသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဘာကို ရေးရမည်ဆိုတာ ဤလူများကို ပြောရုံမက သုံးရမည့်စကားလုံးများကိုပင် ပြောပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''အကြောင်းမူကား၊ အနာဂတ္တိစကားသည် လူအလိုအားဖြင့် ဖြစ်ဘူးသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်တွန်းတော်မူခြင်းကို ခံရ၍ ဟောပြောကြ၏။'' (၂ပေ ၁း၂၁)
''ထိုကျမ်းစာရှိသမျှသည်၊ ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍။....'' ၂တိ ၃း၁၆
ယခု ဤသင်ခန်းစာကို စတင်ရန် သင်၌ အသင့်ဖြစ်ပြီ။
ပထမဆုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့စကြာဝဠာနှင့်ကမ္ဘာမြေကြီးမည်သို့ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင်တစ်ဦးတည်းက သတ္တဝါအားလုံး၏ ကိုးကွယ်မှုကို ခံထိုက်ပုံကို ကြည့်ကြမည်။ ထို့နောက် စာတန်၏မူလအစကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်ပြီး စာတန် ယခု ဘာလုပ် နေလဲ? သူ၏လှည့်ဖြားခြင်းမှ မည်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ရှောင်းရှားနိုင်မည်နည်း? ဆိုတာကို လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်၊ လူသားမည်သို့ ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသနည်း။ ဘုရားသခင်က လူကို ဘာကြောင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ ဆိုတာကို လေ့လာ ကြမည်။
ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ ပထမလူ အာဒံအကြောင်းသိဖို့ရန် ဘာကြောင့် အလွန်အရေးကြီးသည် ကို လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး အာဒံသည် ဘုရားကို မနာခံခြင်းအားဖြင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းကို ဤလောကသို့ သူယူဆောင်လာပုံကို လေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ အာဒံ၏ အပြစ်သည် လူသားတစ်မျိုးနွယ်လုံးအပေါ်သို့ မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကို ကြည့်ကြမည်။ ဤအရာက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်နေသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် အသက်တာသစ်ရရန် ဘာကြောင့်လိုအပ်သနည်း? စသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုရန် ကူညီပေးလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ….မည်ကဲ့သို့ သော စသည်များကို….. လေ့လာကြမည်။
ထို့နောက်၊ အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသားသမီးဖြစ်လာပုံကို လေ့လာကြ မည်ဖြစ်သည်။ ''ခရစ်တော်၌ရှိခြင်း''က ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ ခရစ်ယာန်များ၏ ရန်သူကြီးများဖြစ်သော လောက၊ ဇာတိပကတိ(အသွေးအသား) နှင့် မာရ်နတ်(စာတန်)ကို မည်ကဲ့သို့ အောင်မြင်နိုင်ပုံကို လေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌အသက်တာသစ် ရရှိခြင်းက ဘာကိုဆိုလိုသနည်း? ဆိုတာကို လေ့လာမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ သင်ခန်းစာ၌ အစီအစဉ်သစ် (၄) မျိုးကို ပါရှိပြီး၊ သင်၏ သမ္မာကျမ်းစာကို ကောင်းစွာ နားလည်ရန် နှင့် သာ၍ အရေးကြီးပြီး၊ သခင်ယေရှုကို သာ၍ ကောင်းစွာ ပိုမိုနားလည်လာနိုင်ရန်အတွက် သင်၌ အထောက်အကူ ပြု ပေလိမ့်မည်။
၁။ ဖတ်ရမည့်ကျမ်းပုဒ်များ သည် သင်ခန်းတစ်ခုစီ၏အစတွင်ရှိသည်။ အဖြေစာရွက်ကို မဖြည့်မီ ထိုကျမ်းစာထဲတွင် ရှာဖတ်ပါ။ သင်ခန်းစာကို အရင်ဖတ်ပြီးမှ ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှ ကျမ်းပိုဒ်ကို ဖတ်ရန်သင့်ကို အကြံပေးသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် အဖြေစာရွက်ကို မဖြေမီ သင်ခန်းစာကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ဖတ်ပါ။
၂။ သင်ခန်းစာတစ်ခုစီအတွက် အဓိကကျမ်းပိုဒ်ကို ပေးထားသည်။ ဤ အဓိက ကျမ်းပိုဒ်ကို အလွတ်ကျက်ပါ။
၃။ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခြင်းများ ပါရှိခြင်းဖြင့် ခက်ခဲသော၊ မရင်းနှီးသော စကားလုံးများ အတွက် သင်၌ မစပေလိမ့်မည်။ သင်သည် နားမလည် သော စာသား စကားလုံးကို တွေ့ရှိလာပါက အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခြင်း က@တွင် ကြည့်ပါ။ မတွေ့ပါက သင်၏ အဘိဒါန်(dictionary) တွင် ရှာပါ။ ဤ ကား သင်၌ သင်ခန်းစာကို နားလည်ရန် မစပေ လိမ့်မည်။
ယခု သင်ဤ သင်ခန်းစာကို စတင်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီ။
အဓိကကျမ်းပုဒ်။ “ထာဝရဘုရား၏ိံတ်ြကပတ်တော်အာူးဖင်ႚ မိုဃ်းကောင်းကင်ကို၎င်း၊ိံတ်ြတော်အသက်အာူးဖင်ႚ မိုဃ်း ကောင်းကင် တန်ဆာမဵားကို၎င်း ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ” (ဆာလံ ၃၃း၆)
ဖတ်ရန်ကျမ်းပုဒ်များ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၊ အခန်းကြီး (၁)
သမ္မာကျမ်းစာ၌ ပထမဦးဆုံးသော ကျမ်းကို ဘာကြောင့် ''ကမ္ဘာဦးကျမ်း''ဟုခေါ်သည်ကို သင်စဉ်းစားပါသလား။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (Genesis) ၏ အဓိပ္ပာယ်မှ ''အစ'' (beginning) ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာဦး ကျမ်းသည် အစအဦးအရာများအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းက စကြဝဠာ၏အစ၊ ကမ္ဘာမြေကြီး၏အစနှင့် လူသားမျိုးနွယ်၏အစကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်။ သို့သော် ဤကျမ်းက ဘုရားသခင်၏ အစကိုမူ မပြောပါ။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်၌ အစမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် အမြဲတမ်း တည်ရှိနေခဲ့သည်။
စကြာဝဠာထဲရှိ အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ မဖန်ဆင်းမီကပင် ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းတန်ခိုးတော်အား ဖြင့် တည်ရှိနေခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''အစအဦး၌ဘုရားသခင်သည် ....''ဟုဆိုသည်။ အရာတစ်ခုမျှ အစမပြုမီကပင် ဘုရားသခင်ရှိနေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် တည်ရှိခဲ့သည်မှာ မည်မျှကြာပြီဖြစ်သနည်း? ဘုရားသခင် ဘယ်လောက်ကြာကြာ ဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်နည်း? သူအမြဲတမ်းတည်ရှိမည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''ကိုယ်တော်သည် ရှေးကမ္ဘာအဆက်ဆက်မှစ၍ နောက်ကမ္ဘာအဆက်ဆက် တိုင်အောင် ဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူ၏'' ဆာလံ ၉ဝး၂
ကျွန်ုပ်တို့သည် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ထူးခြားသော စကြာဝဠာထဲတွင် အသက်ရှင်လျက်ရှိ သည်။ ကမ္ဘာအရွယ်အစားမျိုး ဂြိုလ်များသန်းနှင်ချီ၍ ဝင်ဆံ့လောက်အောင် ကျွန်ုပ်တို့၏နေမင်းသည် အံ့မခန်းကြီးမားသည်။ စကြာဝဠာထဲရှိ ကြယ်များမှာလည်း အလွန်ကြီးမားသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေမင်း အရွယ်အစားမျိုး သန်းနှင့်ချီ၍ ဝင်ဆံ့နိုင်သည်။ ကြယ်ကြီး အန်တာရာမှာ အလွန်ကြီးမားသဖြင့် အကယ်၍ ထိုကြယ်ကြီးသာ အခေါင်းပေါက်ဖြစ်နေသော ဘောလုံးကြီးဆိုပါက ကမ္ဘာနှင့် နေကိုထိုကြယ်ထဲသို့ထည့်ပါက ကမ္ဘာသည် ယင်း၏ နေပတ်လမ်းကြောင်းတွင် ပုံမှန်လည်နိုင်ရုံမက အန်တာရာ ကြယ်ကြီး၏ အပြင် ဘက်အစွန်းပိုင်းသို့ တစ်ဝက်မျှပင် ရောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
မိုးကောင်းကင်တန်ဆာများ၏ လည်ပတ်မှုများ အလွန်တိကျသဖြင့် နေကြတ်မည့်အချိန်ကို ကြိုတင်သိနိုင်ရုံမက ဥက္ကာပျံများ၏ အလည်အပတ်ရောက်လာမည့်အချိန်ကိုပင် ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကြယ်တစ်လုံး၏ တည်ရှိမည့်နေရာကို သင်္ချာနည်းအရ တွက်ချက်၍ သိရှိနိုင် သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အစီအရီကျမှုနှင့် တိကျမှုများမှာ မတော်တဆဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်ပေ။ ထိုကြယ်များကို ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့မခန်းကြီးမားသော တန်ခိုးမျိုး ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
စကြာဝဠာကြီး မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့၍ စကြာဝဠာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံ နှင့်ပတ်သက်၍ ထင်မြင် ယူဆချက် အမျိုးမျိုးပေးကြသော်လည်း ဘုရားသခင်မှလွဲ၍ မည်သူကမှ မသိနိုင်ပါ။ စကြာဝဠာကြီးဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြနိုင်သူမှာ သူတစ်ယောက်တည်းသာရှိ သည်။
ကျမ်းစာက ဤအံ့မခန်းကြေငြာချက်ဖြင့် စတင်သည်။ ''အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင် နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော် မူ၏။'' (ကမ္ဘာ ၁း၁)
ဤကျမ်းပုဒ်က ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်မှ ကောင်းကင်တန်ဆာများနှင့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို အတိတ်ကာလ ကျွန်ုပ်တို့ မသိသော အချိန်နာရီတွင် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်ကို ဖော်ပြထားသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို မည်သို့ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ သူ၏နှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် ဖန်ဆင်းသည်။ ကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ '' ထာဝရဘုရား၏ိံတ်ြကပတ်တော်အာူးဖင်ႚ မိုဃ်းကောင်းကင်ကို၎င်း၊ိံတ်ြတော်အသက်အာူးဖင်ႚ မိုဃ်း ကောင်းကင် တန်ဆာမဵားကို၎င်း ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။- '' (ဆာလံ၊ ၃၃း၆)
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ထွက်စကားသည် တန်ခိုးကြီးမားသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် သည် ဖန်ဆင်းနိုင်သောအစွမ်းရှိပြီး အမိန့်ပေးတဲ့အတိုင်း ခပ်သိမ်းသောရာတို့ ဖြစ်တည်လာကြသည်။ ကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား မြွက်ဆို၍ မြွက်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ် ၏။ အမိန့်တော်ရှိ၍ မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း တည်ချက်ရှိ၏။ ”(ဆာလံ ၃၃း၉)
ဘုရားသခင် မြွက်ကြား၍ ကောင်းကင်တန်ဆာများဖြစ်တည်လာသည်။ သူအမိန့်ပေး၍ သူစီစဉ် ထားသည့် ပတ်လမ်းများအပေါ် တွင် ထိုအရာများတည်လျက်ရှိကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ထိုအရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းရုံမက သူ၏အံ့မခန်းတန်ခိုးတော်အားဖြင့်လည်း ထိုအရာများကို ထိန်းချုပ်သည်။ ကျမ်းစာက သူသည် သူ၏စကားတော်၏ တန်ခိုးအားဖြင့် အရာခပ်သိမ်း ကိုထိန်းချုပ်ကိုင်တွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့် သိသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သိသည်။ ကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''လောကဓာတ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်တော်ကြောင့်သာ တည်သည်ကို ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သိကြ၏။'' (ဟေဗြဲ ၁၁း၃)
ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြထားသောအချက်များမှာ တိုတောင်းသော်လည်း စကြာဝဠာ၏ အစနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ သိရန် လိုအပ်သောအရာအားလုံးကို ကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည်။
(၂) ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခြင်း
မည်သည့်အချိန်က ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သလဲဆိုတာ မည်သူမျှမသိပါ။ ဘုရားသခင် ကလည်း မဖော်ပြထားပါ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၁ တွင် ရိုးရှင်းစွာပြောထားသည်မှာ ''အစအဦး၌ ဘုရားသခင် သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၍'' ဟူ၍ဖြစ်သည်နှင့် ပြီးပြည့်စုံမှုကို ညွှန်ပြထားသည်။ ''နံနက်ကြယ်တို့သည် တညီတညွတ်တည်းသီချင်းဆို၍၊ ဘုရားသခင်သားအပေါင်းတို့သည် ဝမ်းမြောက် သဖြင့်ကြွေးကြော်ကြသည့်အချိန်မှာ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အချိန်တွင် ဖြစ်သည်။ (ယောဘ ၃၈း၎-၇)တွင့်ကြည့်ပါ။
ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၂တွင်မူ ခြားနားသောမြင်ကွင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''မြေကြီး သည်အဆင်းသဏ္ဍာန်မရှိ၊ လွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏။ မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှားတော်မူ၏။'' ဟူ၍ပြောထားသည်။ တစ်ချိန်ချိန်တွင် အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ကမ္ဘာမြေကြီးသည် အဆင်းသဏ္ဍာန်မရှိဘဲ လွတ်လပ်လဟာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေမျိုး ကမ္ဘာမြေကြီးဘယ်လောက်ကြာကြာ ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ကျွန်ုပ်တို့မသိပါ။ ဤမှောင်မိုက် ဖုံးလွှမ်းမှုအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်က လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင် စတင် မြွက်ကြားသည်။
ဘုရားသခင်က ''အလင်းဖြစ်စေ'' ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် အလင်းချက်ချင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဘုရားသခင်သည် အလင်းနှင့်အမှောင်ကို ခွဲခြားလိုက်ပြီး အလင်းကို နေ့ဟုခေါ်၍ မှောင်မိုက်ကို ညဟု ခေါ်ခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ညဦးနှင့် နံနက်သည် ပထမနေ့''ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
ဒုတိယနေ့၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မိုးတိမ်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး ထိုအရာများကို သမ္မာကျမ်းစာက မိုးကောင်းကင်ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
မိုးတိမ်ထဲ၌ရှိသောရေနှင့် မြေကြီးအထက်၌ရှိသော ရေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ညဦးနှင့်နံနက်သည် ဒုတိယနေ့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
တတိယနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် ကုန်းမြေမှရေပြင်ကို ခွဲခြားလိုက်သည်။ ကုန်းမြေကို မြေဟုခေါ် ခဲ့၍ ရေပြင်ကို ပင်လယ်ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မြေပေါ်တွင် မြက်၊ အပင်များနှင့် အသီးအနှံပင် များကို ပေါက်စေခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ညဦးနှင့်နံနက်သည် တတိယနေ့ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။
စတုတ္ထနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် နေ့အချိန်တွင် အလင်းပေးရန်၊ ညအချိန်တွင် အလင်းပေးရန်နှင့် ရာသီဥတုများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် နေနှင့်လကို ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ညဦးနှင့်နံနက်သည် စတုတ္ထနေ့ဖြစ်သည်ဟု'' ဆိုခဲ့သည်။
ပဉ္စမနေ့၌ ဘုရားသခင်သည် ငါးများနှင့် ငှက်များကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး ''အသက်ရှင်ရန် လှုပ်ရှားတတ် သော တိရစ္ဆာန်တို့ကို ရေသည် များပြားစွာမွေးဘွားစေ။ ငှက်တို့လည်း မြေပေါ်၊ မိုးကောင်ကင်ပေါ် ဝဲပျံစေ'' ဟူ၍ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ''ညဦးနှင့်နံနက်သည် ပဉ္စမနေ့ဖြစ်သည်''ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဆဋ္ဌမနေ့တွင် ဘုရားသခင်သည် တိရစ္ဆာန်များနှင့် ကုန်းနေ၊ ရေနေသတ္တဝါများကို ဖန်ဆင်းခဲ့ သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် သူသည် လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''ဘုရားသခင်သည် မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကို ကြည့်ရှုလျှင် အလွန်ကောင်းသည်ကို မြင်တော်မူ၍၊ ညဦးနှင့် နံနက်သည် ဆဋ္ဌမနေ့ဖြစ်လေ၏။'' ကမ္ဘာ ၁း၃၁
ဘုရားသခင်၏ အထူးခြားအကောင်းမွန်ဆုံး ဖန်ဆင်းမှုမှာ လူသားဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် မိမိပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အညီ လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ “တဖန် ဘုရားသခင်က၊ ငၝတိုႚပုံသ@ာန်နှင့်တညီ တသ@ာန်တည်း လူကိုဖန်ဆင်းကြစိုႚ။ ” ကမ္ဘာ ၁း၂၆
ဘုရားသခင်သည် ပထမဦးဆုံးသော လူသားကို အာဒံဟုခေါ်ခဲ့ပြီး အာဒံအတွက် မိန်းမဖြစ်သူ ဧဝကို ဖန်ဆင်းပေးခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဧဝသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အားဖြင့် အဆင့်နိမ့်ကျသော တိရစ္ဆာန်ဘဝမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို ဖန်ဆင်း ခဲ့၍ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''ထိုသို့ဘုရားသခင်သည် မိမိ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အညီလူကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီ လူယောက်ျား၊ လူမိန်းမကို ဖန်ဆင်းပြီးလျှင်'' ကမ္ဘာ ၁း၂၇
ဘုရားသခင်သည် သူဖန်ဆင်းထားသောအရာများ၌ အလွန်ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်၍ ''အလွန်ကောင်း သည်''ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
(၄) ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်-ကိုးကွယ်မှုအလုံးစုံကို ခံထိုက်သောသူ
ဤသင်ခန်းစာ၌ အရေးကြီးသောသမ္မာတရားများကို လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် အရေးအကြီးဆုံး အမှန်တရားမှာ ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံး၏ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သည်။ စကြဝဠာ၊ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် သတ္တဝါများသည် အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍သာ ဖြစ်ပေါ်လာကြ သည်။ ဟေရှာယ ၄၅း၁၂ တွင် ဘုရားသခင်က ဤသို့ပြောသည်။ “မြေကြီးကိုလည်း ငါလုပ်လေပြီ။ မြေကြီးပေါ်မှာ လူကိုလည်း ဖန်ဆင်းလေပြီ။ မိုးကောင်းကင်ကို ကိုယ်လက်နှင့်ငါကြက်လေပြီ။ မိုးကောင်း ကင်တန်ဆာ အပေါင်းတို့ကို ငါခန့်ထားလေပြီ''
ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့သောကြောင့် ထိုအရာအားလုံးသည် ဘုရားသခင်နှင့် သာသက်ဆိုင်သည်။ အရာအားလုံးသည် သူတို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သောသူတစ်ဦးတည်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ဘာကြောင့် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။ သူ၏ဘုန်းတော် အတွက် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ စကြဝဠာ၊ ကမ္ဘာမြေကြီးနှင့် အားလုံးသောသက်ရှိသတ္တဝါတို့ကို ဖန်ဆင်းခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သူ၏တန်ခိုး၊ ဘုန်းတော်နှင့် ဥာဏ်ပညာကို ထုတ်ဖော်ပြသ ကြေငြာခဲ့သည်။ ကျမ်းစာက ဤသုို့ဆိုသည်။ ''မိုးကောင်းကင်သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းအသရေတော်ကို ကြားပြော၍ မိုး မျက်နှာကြက်သည် လက်တော်နှင့်လုပ်သောအရာများကို ပြသ၏။'' (ဆာလံ ၁၉း၁)
ဘုရားသခင်သည် အရာအားလုံး၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သောကြောင့် သူတဦးတည်းကသာ ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်မှုကို ရသင့်သည်။ ကိုးကွယ်မှု(worship) ဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သာ ရထိုက်သော ချစ်ခြင်း မေတ္တာ၊ ရိုသေလေးမြတ်မှုနှင့် နာခံခြင်းကို ဘုရားသခင်အား ပူဇော် ပသခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်အခါမှ လူ၊ ကောင်းကင်တမန်၊ ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောသတ္တဝါများနှင့် ပစ္စည်းများကို မကိုးကွယ်သင့်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားကို ကိုးကွယ်ရမည်။ ထိုဘုရားသခင်ကိုသာ ဝတ်ပြုရမည်။'' မဿဲ ၄း၁ဝ
ဘာကြောင့် ဘုရားသခင်တဦးတည်းကိုသာ ဝတ်ပြုရမည်နည်း။ အကြောင်းမှာ သူသည်ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်ပြီး သူတဦးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်ထိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်။ ''အို၊ ထာဝရဘုရား ကိုယ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ထိုအရာတို့သည် အလိုတော်ကြောင့်ဖြစ်၍ ဖန်ဆင်းလျက်ရှိကြပါ၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဘုန်းအသရေ တန်ခိုးတော် ကို ခံစားထိုက်တော်မူ၏။'' (ဗျာဒိတ် ၄း၁၁)
ဆုတောင်းချက် ။ ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်သည် မြေကြီး၊ ကောင်းကင်နှင့်သူတို့အထဲ၌ ခပ်သိမ်း သောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူပြီး။ ကိုယ်တော်ကို ချစ်ခင်မြတ်နိုး၍ ဝတ်ပြုခွင့် ကို ပေးတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်သည် ကြီးမြတ်တော်မူသော ဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်တော်မူပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားတွင် ကိုယ်တော်ကိန်းဝပ်နိုင်ရန်အတွက် နှလုံးသားကို သန့်စင်စေတော်မူပါ။ ဖန်ဆင်းရှင်သခင်ဘုရား။
၁။ သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ပထမဦးဆုံးကျမ်းကို ဤသို့ခေါ်သည်။
(ခ ) ကမ္ဘာဦးကျမ်း
(ဂ ) ဗျာဒိတ်ကျမ်း
၂။ ကမ္ဘာဦးကျမ်း (Genesis)၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။
(ခ ) အစ
(ဂ ) ဥာဏ်ပညာကြွယ်ဝသော
၃။ ဘုရားသခင်တည်ရှိခဲ့သည်မှာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။
(ခ ) ၁၉ဝဝ ကတည်းကဖြစ်သည်။
(ဂ) အစဉ်အမြဲ တည်ရှိနေခဲ့သည်။
၄။ စကြ၀ဠာ၏အစကို ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြနိုင်သော တဦးတည်းသောသူမှာ မည်သူနည်း။
(ခ ) စွယ်စုံကျမ်း
(ဂ ) ဘုရားသခင်
၅။ သမ္မာကျမ်းစာသည် အောက်ပါအံ့မခန်း ကြေငြာချက်ဖြင့် အစပြုသည်။
(က) ကျမ်းစာရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်လာသည်။
(ခ ) အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
(ဂ ) ထာဝရဘုရားမြွက်ဆို၍ မြွက်ဆိုတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏။
၆။ ကွက်လပ်များကို ဖြေရန်စကားလုံးများကို ရွေးချယ်ပါ။
ဘုရားသခင်တဦးတည်းကိုသာ ဘာကြောင့်ဝတ်ပြုရမည်နည်း။ အကြောင်းမှာသူသည် --------ဖြစ်ပြီး သူတဦးတည်းသာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကိုရရန် ------- သည်။
(က) ဖန်ဆင်းရှင်၊ ထိုက်တန်။
(ခ) အကောင်းဆုံး၊ သင့်တော်
၇။ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သနည်း။
(ခ) သူ၏ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေရန်
(ဂ) ကမ္ဘာမြေကို လှပစေရန်
၈။ အဖြေမှန်ကို ဖြည့်ပါ။
ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုဆိုသည်မှာ------သာ ခံထိုက် သော၊ -------၊ -------၊ -------၊တို့ကို ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
(က) ဘုရားသခင်၊ ဘုရားကျောင်းတက်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း
(ခ) ဘုရားသခင်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ရိုသေလေးမြတ်မှု၊ နာခံခြင်း